Genesis 12 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
12 Wathi ke uYehova kuAbram: “Hamba umke ezweni lakowenu nakwizalamane zakho nasendlwini kayihlo, uye ezweni endiya kukubonisa lona;+ 2 yaye ndiya kukwenza ube luhlanga olukhulu ndize ndikusikelele, ndilenze libe likhulu igama lakho; ube yintsikelelo.+ 3 Yaye ndiya kubasikelela abo bakusikelelayo, ndize ndimqalekise lowo ukuqalekisayo,+ kwaye ngokuqinisekileyo ziya kuzisikelela ngawe zonke iintsapho zasemhlabeni.”+ 4 Wahamba ke uAbram kanye njengoko wathethayo uYehova kuye, noLote wahamba naye. UAbram wayeneminyaka engamashumi asixhenxe anesihlanu ubudala ekuphumeni kwakhe kwaHaran.+ 5 Ngoko uAbram wathabatha uSarayi umfazi wakhe+ noLote unyana womntakwabo+ nayo yonke impahla ababeyiqwebile+ nemiphefumlo ababeyizuzile kwaHaran, baza banduluka besiya ezweni lakwaKanan.+ Ekugqibeleni bafika ezweni lakwaKanan. 6 Walityhutyha ke uAbram ilizwe elo wada waya kufikelela kwindawo yakwaShekem,+ kufuphi nemithi emikhulu kaMore;+ yaye ngelo xesha kwakukho amaKanan kwelo lizwe. 7 Wabonakala ke ngoko uYehova kuAbram waza wathi: “Imbewu yakho+ ndiya kuyinika eli lizwe.”+ Emva koko wamakhela khona isibingelelo uYehova, owayebonakele kuye. 8 Kamva wasuka apho waya kummandla weentaba ongakwimpuma yeBheteli+ waza wamisa intente yakhe, iBheteli ingasentshona, iAyi+ yona ingasempuma. Waza ke wamakhela khona isibingelelo uYehova,+ wabiza egameni likaYehova.+ 9 Emva koko uAbram wayichitha inkampu, wahamba emisa iinkampu ngeenkampu esingise eNegebhi.+ 10 Kwabakho indlala ezweni waza uAbram wehlela ngaseYiputa ukuze ahlale khona njengomphambukeli,+ kuba indlala yayiqatha elizweni.+ 11 Kwathi akusondela ukuba angene eYiputa, wathi kuSarayi umfazi wakhe: “Khawuncede, kaloku! Ndazi kakuhle ukuba ungumfazi omhle ngembonakalo.+ 12 Ngokuqinisekileyo kothi akukubona amaYiputa, athi, ‘Ngumfazi wakhe lo.’ Kwaye aya kundibulala ngokuqinisekileyo, kodwa wena aya kukugcina uphila. 13 Uze uncede uthi ungudade wethu,+ ukuze kulunge kum ngenxa yakho, uze uphile umphefumlo wam ngenxa yakho.”+ 14 Kwathi akungena uAbram eYiputa, amaYiputa ambona umfazi lowo, ukuba wayemhle kakhulu. 15 Nazo iinkosana zikaFaro zambona zaza zamncoma kuFaro, waza wasiwa umfazi lowo endlwini kaFaro. 16 Yaye wamphatha kakuhle uAbram ngenxa yakhe, waza waba nezimvu neenkomo namaesile nezicaka nezicakakazi neemazi zamaesile neenkamela.+ 17 Ke ngoko uYehova wambetha uFaro nendlu yakhe ngezibetho ezikhulu+ ngenxa kaSarayi, umfazi ka-Abram.+ 18 UFaro wambiza uAbram waza wathi: “Yintoni na le undenze yona? Kutheni ungandixelelanga nje ukuba ngumfazi wakho?+ 19 Bekutheni ze uthi, ‘Ngudade wethu,’+ njengokuba nje ngoku ndiphantse ndamthabatha ndamenza umfazi wam? Nanko ke umfazi wakho. Mthabathe uhambe!” 20 Waza uFaro wawamisela umyalelo amadoda ngaye, aza ampheleka yena nomfazi wakhe nako konke awayenako.+